जात्रै जात्रा निर्देशक भन्छन् 'सुयोगले सम्भावना देखाए'
जात्रै जात्रा निर्देशक भन्छन् ‘सुयोगले सम्भावना देखाए’
प्रकाशित : शुक्रबार, असार २७, २०७६१२:३४
फिल्म । रिलिजको पुर्व सन्ध्यामा बिहिवार साँझ राजधानीमा फिल्म ‘सानो मन’को प्रिमियर गरिएको छ । प्रिमियरमा नेपाली फिल्म तथा संगीत क्षेत्रका विभीन्न व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । फिल्म हेर्न आएका अधिकांसले यसलाई मन पराएका छन् । यसैक्रममा पछिल्लो समय आफु निर्देशित फिल्महरु लगातार रुपमा सफल बनाउदै आएका निर्देशक प्रदीप भट्टाराईले सुयोगको सम्भावनाको कुरा गरेका छन् ।
‘फिल्म हेर्दा लभ स्टोरीलाई न्याय गर्न सक्ने नयाँ निर्देशक देखिएका छन्’ फिल्म हेरेपछि उनले प्रतिक्रिया दिए । जात्रा मार्फत डेब्यु गरेका निर्देशक भट्टराईले डेब्यु फिल्ममा पाउने प्रतिक्रियाले निकै महत्व राख्ने समेत बताए । ‘उहाले लभ स्टोरीलाई पर्दामा उतार्न सक्ने सम्भावना देखाउनु भएको छ , सम्पूर्ण टिमलाई शुभकामना’ निर्देशक भट्टराईले सफलताकको कामना गरे ।
फिल्म हेर्ने अधिकांसले निर्देशक सुयोग गुरुङको तारिफ गरेका छन् भने कलाकारहरु आयुष्मान डिएस जोशी र शिल्पा मास्केले पनि उनको ‘कन्फिडेन्ट’ को तारिफ गरे । फिल्म हेरेपछि अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले ‘मिठो प्रेम कथा’ भनिन् ।‘फिल्म निकै सफ्ट बनेको छ भने कलाकारहरुले निकै राम्रो काम गरेका छन्’ प्रियंकाले भनिन् । उनले लभ स्टोरी मन पराउने दर्शकलाई फिल्म हेर्न समेत आग्रह गरिन् । यसैगरी प्रिमियरमा पाएको प्रतिक्रियाले निर्देशक सुयोग गुरुङ निकै उत्साहित थिए । ‘प्रतिक्रियाले नर्भस बनाएको छ र उत्साहित पनि’ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निर्देशक गुरुङले भने ।
फिल्म हेरेका अधिकांसले आयुष्मान डिएस जोशी र शिल्पा मास्केको पनि तारिफ गरेका छन् । ‘फिल्ममा हामीले मेहनत त गरेका छौ नै तर हाम्रो मेहनतमा निखारता ल्याउने श्रेय सुयोगलाई जान्छ’ शिल्पाले भनिन् । आयुष्मानले पनि निर्देशकको कामको तारिफ गरे । ‘मैले पाएको प्रतिक्रियाले त खुसि छु नै साथै डेब्यु फिल्ममा सुयोगजीले पाएको प्रतिक्रियाले निकै खुसि बनाएको छ’ उनले भने ।
यसमा सक्षम सुवेदी, गौरी मल्ल, विशाल पहारी, शिशिर वाङदेल, रश्मी भट्ट, देव कुमार श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरुको अभिनय छ । आलोक शुक्लले छायांकन गरेको यस फिल्मका निर्माताहरू योगेश गुरुङ, राजीव श्रेष्ठ, रमेश के. मित्तल र राजेन्द्र मानन्धर हुन् । समिर सुनवार र निर्देशक गुरुङको संयुक्त लेखन छ । ओ.पि.जी फिल्मस्, ए प्लस इन्टरटेन्मेन्ट र हाई टेक इन्टरटेन्मेन्टको संयुक्त ब्यानरमा यो फिल्म निर्माण भएको हो ।
विवाहमा एल्बम सार्वजनिक
भारतमा निल सम्मानित
‘मुरलीधर एकल साँझ’ सम्पन्न
कस्तो छ सलमान र प्रियंकाको सम्बन्ध ?
आँचललाई उदीपको एक दिन !
इकु भन्छन् ‘बच्चाको लागि आश्रम बनाउने सपनाछ’